बिमान चड्दा चिनजान थिएन, एकै सिटमा परेपछि सामान्य कुराकानीपछि युवतीले…. – Sidha Kura
शरिरको आधा तौल घटाएकी युवतीका अधिकांश अंगले काम गर्न छाडे, मुटुदेखि महिनावारीमा समस्या
झन् झन् महंगीदै प्रभाष, आदिपुरुषका लागि मात्रै मागे १२० करोड भारु
सेवाग्राहीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने नायब सुब्बालाई कठालोमा समातेर लग्यो प्रहरीले
विप्लवलाई लाग्यो अहिलेसम्मकै कडा झड्का, यी चर्चित ४ नेताले छाडे साथ, एक्लिँदै गएका विप्लवले अब के गर्लान् ?
दक्षिण अफ्रिकाकी एक महिलाले ७ महिनामै एकैपटकमा जन्माइन् १० सन्तान, राखिन बिश्व रेकर्ड
आखिर किन यसरी गाईको पेटमा प्वाल पार्छन् अमेरिकी किसान ? यस्तो छ बास्तबिक कारण
चितवनमा आमाले बिक्रि गरेकी छोरी भारत कटाइयो, बच्चा एक्लै नछोड्नुस् यसरी भारतबाट किन्न – भिडियो हेर्नुहोस्
प्रेमिका जोडेपछि खर्च बढ्न थाल्दा बने चोर, यति चोरे की बाईक स्कुटरको लाग्यो चाङ्ग
दोस्रो बच्चाको आमा बन्दै करिना, शेयर गरिन् योगाका तस्वीर
ड्राईभिङ लाईसेन्सको अनलाइन आवेदनबारे अबदेखी नयाँ व्यवस्था
मुख्य पृष्ठ /रोचक/बिमान चड्दा चिनजान थिएन, एकै सिटमा परेपछि सामान्य कुराकानीपछि युवतीले….
बिमान चड्दा चिनजान थिएन, एकै सिटमा परेपछि सामान्य कुराकानीपछि युवतीले….
1,066 1 minute read
भ’र्जिन अ’टला’न्टिक विमानमा यात्रा गरिरहेकी एक महिलाले उडिरहेको विमानमा नै शा’री’रि’क स’म्ब’न्ध राखेर सबैलाई चकित बनाएकी छन् । १३ मार्चमा गटविक एयरपोर्टबाट मेक्सिकोका लागि उडेको विमानमा ती महिलाले अपरिचित व्यक्तिसँग छोटो कुराकानीपछि यौ’न स’म्ब’न्ध राखेको खबर बाहिर आएको हो ।
सो फ्लाइट ११ घन्टाको थियो । ती महिलाले अपरिचित युवालाई सुरुमा चु’म्ब’न गरेको र त्यसपछि इकोनोमी क्लासको बाथरुममा गएर आ’प’त्ति’ज’न’क क्रि’याकलाप गरेको दि सनले जनाएको छ । दुवै जना बाथरुपमा छिरेको केही समयपछि विमानका कर्मचारीले ढोका ढकढकाएका थिए ।
जब ढोका खुल्यो त्यहाँ आ’प’त्ति’ज’नक अवस्था देखिएको विमानका कर्मचारीले जनाएका छन् ।रो’चक त के छ भने विमानमा चढ्दा यी दुईले एकअर्कालाई चिन्दैनन् थिए । बोरिङ पास लिँदासम्म पनि दुबैबीच परिचय भएको थिएन । विमानका प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार ती महिना र”क्सी पि’ए’र विमानमा चढेकी थिइन् । उनीसँग बसेका ती व्यक्तिले भने, ‘उनी सबैसँग फ्रे’न्ड्ली भएर बोल्दै थिइन् ।
म र मेरो साथीसँग कुरा गर्ने कोसिस गरिन् । त्यसपछि विमानमा हिडिरहेका एक व्यक्तिसँग कुरा गर्न थालिन् । तत्काल ती अपरिचितलाई चुम्न थालिन् । केही समयपछि उनी बाथरुममा गइन् । ती युवक पनि पछि पछि गए ।’त्यसपछि बाथरुममा के भइरहेको छ भन्ने कुरा विमानमा यात्रा गरिरहेका यात्रुले अन्दाज गर्न सक्थे किनकि ती महिला चर्को आवाज निकालिरहेकी थिइन् ।
फेला पर्यो जे माग्यो तेहि पूरा हुने मन्दिर ! यसरी निस्किन्छ अनौठो नाग देवता
भर्खरै बिहे गरेर आएकी श्रीमतीले आमालाई नेकलेस चोर लगाइन्, सहन नसकेर आमा धुरुधुरु रोइन् (कथा)
प्रेमीसँग होटलमा थिइन् श्रीमती, अचानक श्रीमान अगाडि आएपछि…
ब्रा सानो कि’निदिएको भन्दै विवाह भएको ११ घण्टामै डि’भोर्स !
गुगलमा ‘फटाहा’ सर्च गर्दा किन आउँछ प्रधानमन्त्री देउवाको नाम ?
1 week अघि
अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी २ चिज, नत्र पछुताउनु पर्नेछ
महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? जानी राखौँ
यी ११ सपनाले मानिसको मृ त्युको संकेत गर्छ
स्वेता खड्काले आँफुभन्दा निकै कान्छा युवक बिजेन्द्रसन्ग बिहे गर्नुको खास खुल्यो, यत्रो ठूलो धोका ?